Izitya zokuqala kunye nezolungileyo zoNyaka omtsha - okokufunayo!
I-salad yePatato ngeenkomo zenyama
800 g yenkomo enyoyiweyo
Iipunipoli ezi-2 zitshatywe ibhotela
ityuwa, ipepper, iswekile
1.2 kg yeebhatateshi ezingenakusiza
Iipuniwe ezi-5 zeoli yeoli,
4 ukhukhamba ezinkulu
4 iipunipoyi ze-cucumber brine
2 iintloko zee-anyanisi
4 iipunipoyi iwayini elimhlophe iwayini
Iipiliti ezintathu zesinaphi
1 iqela leparsley
200 ml ukhilimu
100 ml yeayonnaise
Inyama yesitya sokutya esomileyo, unqunywe uhla lwe-fat. Kwi-brazier ephathekayo, ukufudumala ibhotela ebhiqizekileyo kwaye ufune inyama ngamehlo onke imizuzu eyi-10. Ipepper kakuhle kunye netyuwa. Faka inyama yenkomo kwi-oven kwi-1200 ° C malunga nemizuzu engama-35-40. Kungcono ukulinganisa ubushushu obubunzima beenkomo ezigcobileyo usebenzisa i-thermometer ekhethekileyo. Ukuba kukho i-55-65 ° C, inyama yangaphakathi iyabomvu.) Yisuse ehovini uze uyivumele ukupholisa. Ngeeyure eziyi-3-4, zibeke kwifriji. Iibhatateshi zihlanjululwe kwaye zinqunywe zibe ziinqununu. Kwi-pan enkulu yokupaka, iifuni ezi-2 ezifudumeleyo zeoli yeoli kunye nefry iiitatayi malunga nemizuzu engama-20. Ityuwa, iphepiti kwaye ifakwe kwisitya esikhulu. Iikotyi zigalelwe emacaleni amancinci. I-onion peel, uthathe iikhabhi uze uvumele iifuni ezintathu zeoli yeoli. Emva koko uthele iviniga, i-350 ml yamanzi kunye ne-i-brine brine. Yiza kwi-thumba uze udilize imizuzu emi-2-3. Gquba isardadi kunye nexesha kunye ne-teaspoon ye-pepper kunye ne-1-2 ithisipuni yeshukela. Hlanganisa i-marinade eshushu kunye namazambane kunye namakhukhamba uze ume malunga nemizuzu engama-30. Ukuze ulungise i-sauce, hlamba i-parsley, i-pat eyomile kwaye idibanise kakuhle. Hlanganisa nekhilimu kunye ne-mayonnaise. Ixesha ngetyuwa, pepper kunye ne-pinch yeshukela. Sika inyama yenkomo ibe yincinci kwaye usebenze kunye nesaladi ye-mbatata kunye ne-sauce etafileni.
Ufuna ukukhonza inyama yenkomo egazini?
Emva koko, gcoba isilwanyana sokugcoba ngesilwanyana kunye nokuluma malunga nemizuzu engama-10, uze uthathe iinqununu malunga nobubanzi obu-1 cm. Ngaphambi koko, lungiselela isaladi yezambatho kunye ne-sauce ekhonzayo kanye, kude kube yilapho inkabi ebisiweyo ikhulile.
I-crispy pancake kunye nama-mushroom
4 izibonelelo zesitya:
500 g yamagqabi
3-4 iincinci zembewu
4 iifuni zezipuni zityalo
ityuwa, pepper, nutmeg
100 g i-cream cream
75 amagremu weeshizi
750 g yeepatata ezenziwe ngamapulati
1 isitroyiki sokutya isitashi
100 g yeetoni zeetoni
I-sauce amakhowe, kunye namaqabunga e-sage-strips. I-onion peel, unqume ikhanda elinye kwiikhabhi, isigxina sesibini esincinci. Ukucwiliswa kwepuni ye-oyile yemifuno kwi-pan yokupanda kwaye ufune ama-mushroom malunga nemizuzu engama-5. Hlanganisa i-anyanisi kunye ne-sage kunye ne-fry kunye kunye nabo. Ixesha kunye neetyuwa kunye nepilisi. Emva koko uthele ngomgubo uze ufefe kancane. Phala i-350 ml yamanzi kunye ne-cream, ukuzisa kwi-thumba uze udilize imizuzu engama-3-4. Ungavumeli i-sauce iphelile. Ukuze utywala, jonga ishizi kwisitya. Kukho, ncalela iitapile ezikhethiweyo. Yongeza iindlovu ze-anyanisi, ke iqanda kunye nesitashi. Amathanga. Ixesha ngetyuwa, pepper, nutmeg. I-fat fry ngaphandle kwebhotela kuze kube yinto. Susa kwi-pan yocingo. Yongeza ipoyiji ye-1 yesoyile yemifuno kwi-greased. Ukususela kumbindi wezambatyambo, ifom yeefake kunye nefry ukuya kwemizuzu engama-2-3 ukuya kwelinye icala kuze kube yilapho udibanisa, ukongeza ioli njengoko kuyimfuneko. Khonza ama-pancakes nge-bacon kunye ne-mushroom sauce.
Iipatato kunye neBet Chips
4 ezinkulu izilimo eziyi-tuber zeetayibhile ezingenayo
2 beet ezinkulu
malunga neelitha ezili-1.5 zeoli yelanga
Iifatata kunye neebhereyi zihlambulukile, zihlanjwe zihlulwe zi-2 mm ezinqamle. Kwi-fryer ejulile okanye epanini enkulu, ukutshisa ioli ukuya kwi-180 ° C. Fry the chips kwi 3-4 servings de igolide (amazambane - imizuzu 2-3 ukukhonza, beet - imizuzu 3-4). Ukususela ngamaxesha, hlala iinqayi kwioli. Fumana umsindo kwaye ubeke ityhuse yephepha ukucima. Ityuwa uze upholile. Yiya etafileni ngekhilimu omuncu.
Namathisa ngepilisi elimnandi
Le nhlanganisela ebalulekileyo ye-pasta, ipolisi kunye ne-fried crispy custy of cubes cubes iya kudibanisa iindidi kwi-culinary "repertoire."
2 obomvu bell pepper
3 iipuniwe zeoli yeoli
1 encinci ye-thyme
2 isipuni se-tomato
300 g yeetekisi
400 g ye-pasta emfutshane
ayikho ipaprika enamandla
I-anyanisi kunye nepelepele ebomvu banqunyulwa kwiibhubhu ezincinci kwaye bayeke epanini kwipuni ye-1 yeoli yeoli (malunga nemizuzu emi-5). Okwangoku, phawula amaqabunga e-thyme uze uwagxube. Susa kwi-pan 4 izipuni zepilisi kunye no-anyanisi uze ubeke eceleni. Yongeza unamathisele utamatisi kwi-pepper esele kunye ne-anyanisi, kwaye ulondoloze. Phala i-350 ml yamanzi, yongeza i-thyme. Yiza kwimathumba uze udibanise phantsi kwesiqhekeza imizuzu eyi-10. I-peel ii-litate kwaye uthathe ama-cubes amancinci. Fry kwizipuni ze-2 zeoli yeoli kunye nemizuzu engama-10 uze udideke. Ukupheka i-pasta ngamanzi anosawoti ngokwemiyalelo epakethe. Yongeza i-garlic eqoshiwe kwiifatata. Hlaba yonke into, ityuwa, ipilisi. Umxube wemifuno utshitshiswe nomxube we-puree. Ixesha kunye ne-paprika. Yongeza i pepper. Hlanganisa i-pasta kunye neekatebhu zepatato kunye ne-sauce.
Isaladi yeSitaliyane kunye noPenne kunye neSalami
300 amagremu we-pasta i-foam
1 encinci ye-fennel tuber
100 g ye-arugula
4 iipuniwe ezineviniki ezimhlophe zebhasamu
1 isipuni seTabasco
2 iisupuni ze-Worcester sauce
1 isipuni se-honey honey
Iipuniwe ezi-5 zeoli yeoli
2 amathisipuni ama-capers asemathinini
100 g i salami
100 g yeminqumo
Ubilise i-pasta ngamanzi anetyuwa ngokwemiyalelo kwiphakheji. I-Fennel tuber ihlambulukile, ihlambe kwaye idibanise kakuhle. Ukulungiselela ukugqoka i-saladi, thabatha i-ladle (malunga neetapuni ezi-5) zomhluzi, apho i-pasta ilungiselelwe khona. Hlanganisa neviniga, iTabasco, i-Worcesters sauce kunye nobusi. Shake ioli yeoli. I-Peel uze udibanise igalikhi ngokukhawuleza kwaye udibanise kunye ne-capers yonke ngaphandle kwama-pedicels. Thela i-pasta uze uhlanza kakuhle ngamanzi abandayo. Ukuphosa kwi-colander, vumela ukucoca, uze udibanise kwisitya se-saladi ngokugqoka. Yongeza i-salami, iminquma kunye ne-fennel. Masibeke isaladi malunga nemizuzu engama-30. Okwangoku, hlanza i-arugula, gxobhoza amanzi uze uyinqumle. Faka kwisaladi. Ixesha lokunambitha nepepper kunye neTabasco. Qaphela: iresiphi yokugcwalisa i-vinaigrette
Ngaloo mi saladi, ukugqoka i-vinaigrette yeklasi kuhambisana ngokufanelekileyo. Nantsi iresiphi:
1. Uviniga, ityuwa, i-pepper kunye noshukela (okanye ubusi) xuba ii-coronals okanye ifom.
2. Kancinci kongeza ioli uze usebenze ngamandla kuze kube yilapho ubunzima buba yinto ehambelanayo.
3. Yongeza ezinye izithako, ezinjenge-anyanisi, i-garlic, izityalo ezivumba.
Isaladi i-cordon eluhlaza okomhlaza kunye nekhilimu omuncu kunye nemifuno
1 iqela le-anyanisi
200 g ukhilimu omuncu
1 ithisipuni yesardadi
6 isipuni se-apple juice
100 amagremu omnxeba omnci
I-100 g i-ngulube eboyiweyo enqabileyo
100 g yeGouda ushizi
4 izaqathe ezincinane
1 intloko ye-lettuce ye-iceberg
1 intloko ye-salaacchio isaladi
Ukuze ulungise umqunga weengca, uhlambe uze udibanise amanzi. Sika i-parsley ngokukhawuleza, nqunqisa u-anyanisi oqoshiwe kunye namasongo. Hlanganisa ukhilimu omuncu nge-mustard kunye nejusi ye-apula. Ixesha ngetyuwa, pepper kunye ne-pinch yeshukela. Yongeza imifino. Nge ham kunye nengulube inqumle amanqatha amaninzi, ukuba kunjalo, susa i-crust kwi-cheese uze unqume onke amanqaku afanayo. Iinqotyi zicocekile, kwaye i-grate ye-grater. Iifoloji zihlamba, zidibanisa ngamagqabi kwaye zinqumle amacwecwe. Hlanganisa zonke izithako kunye nexesha kunye ne-sauce.
Indlela yokomisa isaladi
Ukuba awunalo ixesha lokulinda de lide, faka isaladi emanzi kwihayile ecocekileyo ekhishini. Gcwalisa iindwangu zelinen (fumana iphoyinti) kwaye ugxininise encinci phezu kwequla. Ngoko ke umladi makomile kwaye awuyi kuqubuka!
Isaladi ye-Watermelon kunye noshizi ethambileyo
1 kg ye-pulp ye-watermelon edibeneyo
1 iqela lomsila
4 iincinci ze-mint esitsha
ishukela elimdaka 4 izipuni
I-pulp of watermelon ngaphandle kwe-peel yinqumle imichilo. Ukuhlanjululwa kwinqwelo kunye nokunqunyulwa kwiibonda ezincinci. Geza i-mint, gxobhoza amanzi uze uthathe amacwecwe amakhulu. Ukusuka kwi-lime, cwina ijusi uze udibanise netyuwa, pepper kunye ne-teaspoon yeshukela elibomvu. Yongeza ioli. Hlanganisa umgqomo ogqityiweyo kunye ne-radish, i-watermelon kunye ne-mint. Yeka umvuzo umele malunga nemizuzu eyi-10. Beka isaladi kwiiplate, phezulu kweso. Le saladi inokunikwa ngefomethi yenkuku.
Isobho seMushroom ngegalikhi kunye nesonka seeshizi
50 g yeParmesan ushizi
2 ii-basil ze-basil
50 g yebhotela
isiqingatha sesonka sesonka
400 g yomxube wama-mushroom (ama-oyster amakhowe, ama-mushrooms, ama-mushroom)
2 iipuniwe zeoli yeoli
1 ithisipuni yomgubo
200 g i-cream cream
Ukuze ulungiselelwe isilwanyana, garn parmesan kwi-grater. I-basil ihlambe, ihlume iifinki kwaye, emva kokufakela ezimbalwa, nqabisa inkulu enkulu. I-garlic, i-peel, idibanise kakuhle kwaye udibanise nebhotela, i-half-parmesan ne-basil. Ixesha kunye neetyuwa kunye nepilisi. Ukucwilisa i-ovini ukuya kwi-175 ° C. Isonka sesonka, kodwa ungayinqumli ngesonka. Ukusasa isonka kunye nomxube weoli. Cindezela ngokukhawuleza iinkcazo omnye komnye. Mkhulule isonka ukusuka ngasezantsi kwisithathu kwi-foil. Ukuphalaza kunye neParmesan eseleyo kwaye ubhake umzuzu wama-20-25. I-onion ikhasi kwaye uthathe ii cubes. Hlanza amakhowe. Ukucwilisa ioli yeoli yomnqophiso kwiphirela uze ufune ama-mushroom kude kube yigolide. Ixesha kunye neetyuwa kunye nepilisi. Beka eceleni 2-3 iipuniwe zamakhowe. Yongeza i-anyanisi kuma-mushroom asele kwaye udibanise encinane emlilweni. Ngaphezulu kweefama zokutya kunye nokuhlangula. Dlulisa i-400 ml yamanzi, ukhilimu, ulethe kwi-thumba uze udilize imizuzu eyi-10. Isidlo sihlambuluke. Ixesha lokunambitha ngetyuwa, ipepper kunye nejisi lemon. Yongeza amakhowe aphethwe. Sasaza kwiiplate, ufefe nge-basil. Khonza ngamacroutons ashushu.
Inkukhu kunye noshizi kunye nemifuno, iizambane ezifihliweyo kunye noonyiki
Ii-bunches ze-basil kunye ne-parsley
200 g e-fat fat-fat
1 inkukhu (malunga ne-1.3 kg)
1 intloko ye-anyanisi
350 ml yewayini emanzi emhlophe
1 kg yeetekisi
1 isiqu se-leek
500 g izaqathe
200 ml yobisi
2 iisupuni zomgubo
Imifuno ehlukileyo ukusuka kwiinqununu, ngokukhawuleza usike amaqabunga, xuba noshizi kunye nexesha kunye nepilisi. Geza inkukhu, ityuwa ngeetyuwa kunye nepipper. Ukwahlula isikhumba emgodini kwisisu esiswini sebele ukwenzela ukuba kukho "iipokotshi" ezimbini. Ngomnye, faka i-73 ieshizi kwaye usasaze i-pulp. Yilungisa i-oven ukuya kuma-75 ° C. I-onion peel, hlukanisa kwiindawo ezili-8 kunye nendawo ngaphakathi kwenkukhu kunye neziqu zemifino. Umgodi kwisisu sele ulwa kunye ne-skewers kunye noboyiweyo. Beka isidumbu kwiphepha lokubhaka. Bhaka inkukhu malunga neyure kunye nemizuzu engama-30. Kwi-100 ml yamanzi, qhafaza isipuni setyuwa kwaye maxa wambi ufefe inkukhu. Emva kweyure eli-1 lokugcoba, uthele iwayini kwi-tray baking. I-Peel litate kwaye ubilise. I-leek-peel, ucezu olunqabileyo kwaye uvumele ipofu ye-1 yebhotela. Iinqhezu zihlambulukile, kwaye zinqunyulwe. Gcwalisa kwi-1 isipuni sebhotela nge-2-3 tablespoons yamanzi kunye ne-pinch yeshukela. Phula i-lemon kunye ne-1 ithispoon yeshukela kwaye, ugqugquzela, i-caramelize ngokushisa okukhulu kwiminithi emi-2. Ityuwa encinane. Ungavumeli imifuno ipholile. Ukusuka epanini kunye namazambane ukucoca amanzi, engeza iipunipoli ezi-2 zebhotela, ubisi uze uphakamise kwi-puree. Ixesha kunye neetyuwa kunye nepilisi. Thatha inkukhu ephuma ehovini. Yenza ijusi ngokusebenzisa isihlunu kwisitya. Yongeza amanzi kumthamo we-400 ml. Bilisa, xuba ishiyi esele. Yongeza umgubo we-sauce, ixesha lokunambitha. Khonza inkukhu ngeetayibisi ezifihliweyo, i-sauce kunye nemifuno ye-caramelized etafileni.
Ama-muffins e-Blackberry ane-sauce ye-vanilla
Kwi-4 servings (malunga nama-muffins angama-16) izitya:
1 kg 125 g iberberryberry
125 g yomgubo
1 tsp. i pow powder
1 tsp. soda yokubhaka
75 g + 2 tbsp. l. ushukela
1 isikhwama se-vanillin
4 tbsp. l. ioyile yemifuno
125 g ye-cottage cheese
1 sachet ye powder kwi-vanilla sauce
400 ml yobisi
100 g yekhilimu
Bhala uluhlu lwama-blackberries. Kwiphepha lokubhaka, faka iikhebhu ngomgca ococekileyo wokubhaka iikhokheki (2 izicucu enye kwelinye). Ukucwilisa i-oven ukuya kuma-200 ° C. Hlanganisa umgubo kunye ne-powder baking kunye ne-soda. I-whisk ye-egg, engeza i-75 g iswekile, i-vanillin, ioli kunye ne-cottage cheese. Yongeza umxube womgubo uze udibanise kakuhle kunye nezinye izithako. Yongeza iberryberry. Ukusebenzisa i-teaspoon, usasaze inhlama ephuma kumaphepha ephepha. Bhaka kwihhavini elitshisayo kwisilinganiso semitha eyi-18-20. Vumela ama-muffins ukuba apholise. Ubunzima bokulungiselela i-vanilla sauce exutywe ngokuxutywa kunye neepuniji zeeshukela ezi-6 kunye neepuni ze-6-7 zobisi. Olunye ubisi kunye ne-ukhilimu luzisa kwimilenze, yongeza i powder ehlanjululweyo, kwaye uvuselele, uphinde ubilise. Nciphisa i-muffins ephodisiweyo eneeshukela ezinobisi. Bakhonze nge-sauce efudumele okanye ebandayo. Ukuba isibini se-muffins asiyiziqhamo, zibophe kwi-foil kunye ne-frozen.
I-Vitamin Drink Fruit Blast
Iintlobo zezidlo ze-oatmeal
Indlela yokujongana nokukhathala komlenze?
Indlela yokukhetha nokutshala izityalo zemithi yezithelo?
I-Millet, izakhiwo zokuphilisa kunye nesicelo
Indawo yokuhlala yezixhobo zombane
I-Psychology: usapho olonwabileyo